မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Samsung Galaxy S6 ရဲ့ Oreo update! – AsiaApps
January 17, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Samsung Galaxy S6 ရဲ့ Oreo update!
၂၀၁၅ ကတည်းကထွက်ရှိထားတဲ့ Samsung Galaxy S6 အတွက် Android ရဲ့နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Oreo update ဟာ ဒီလထဲ (သို့) ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Galaxy support rep နဲ့စကားပြောပြီးတဲ့ User တစ်ဉီးရဲ့ post ကနေသိရှိခဲ့ရတာပါ။
ရက်အတိအကျမသတ်မှတ်ရသေးပေမယ့် သူပြောပုံအရဆိုရင် S6 အတွက် Oreo update ဟာသေချာသလောက်ကိုရှိပါတယ်။ S6 လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ S7 (သို့) S8 ဆီကိုလာဖို့ကတော့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ S9 နဲ့ S9 plus ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပမယ့် MWC (Mobile World Congress) မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ S9 နဲ့ S9 plus ကတော့ Android oreo နဲ့ပဲရောက်ရှိလာဖို့များပါတယ်။ Update အသစ်ရော၊ Model အသစ်ရော မြင်ရဖို့ကတော့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။
Oreo for Samsung Galaxy S6 could be arriving soon https://t.co/PLs0nOmdpW pic.twitter.com/Jkz5dDbHjr
— BBC SEWA (@bbcnepalisewa) January 17, 2018